Nhau uye Maitiro |
Kudhinda & Kudhaya
Kudhinda & Huru
Denim Pulp Kudaya uye Kushamba
Yakakosha yePad Kuzeya neLong Machine
Nhau uye Maitiro
Anopfuura mazana mana ezviuru emamita pazuva muzvitoro, simba rinosvika 70%, rakazara mutsara zvakare
na admin on 20-08-03
Musika wegore rino wekushongedza zvipfeko unobvumira vazhinji vevashandi vekugadzira machira avo vane mafekitori kusangana kekutanga iyo "mari yemombe" mumakore apfuura yakave mutoro unorema. Pakati pehafu yekutanga yegore anenge mafekitori ezvimwe zvipfeko akange ari munzvimbo yakaderera, mitengo yakakwira ...
Musika hauna kusimba, Hangzhou Shaoxing dhayeti yekucheka fekitori yakacheka dhayeti
na admin on 20-07-28
NdiJuly uye inguva inopisa kwazvo pagore, uye mukati mekupfekedza uye kupedzisa musangano weChirungu Kudhinda uye Dyeing Co, Ltd. muKeqiao Binhai Nzvimbo Itsva muShaoxing, tembiricha haina kukwirisa sezvaungatarisira. " Mamiriro acho ezvinhu akakomba kupfuura aya mu3, ...
TY TexChem Akwazisa Kushanya kwaGarry
na admin on 20-06-29
Panyika panogara vanhu, pane vangangoita Chinese vanoshandisa zvimiti. Iko kune machira, kugeza, kusanganisa uye kudhiza, kudhinda uye kudhiza mafekitori, zvinoita kunge paine kushandiswa kwemaficha kubva kuTY TexChem. Iwo anobatsira akati atengeswe kwete muChina chete, asiwo kune dzimwe nyika, nzvimbo dziri padyo ...
Nzvimbo yekugara yeYarn fekitori muIndia inoramba ichishata
na admin on 20-05-27
Vanoongorora nezvekuIndia vanoti kunyangwe mitengo yemakotoni kuIndia yakanyanyisa kuderera uye zvigayo zvekotoni zvichiri kubatsirwa nekugadzira, kuvhara nekuvhara kwakakonzerwa nedenda kunodzikira kutarisirwa kwevatengi mumwedzi mitanhatu inotevera. Ipo covid-19 ichakanganisa kudzika kwemazhinji comp ...
Iwe unonyatsoziva iyo yakajairika polyester mukudhinda nekudhaya mafekitari?
na admin on 20-05-26
Polyester yakakosha mhando yekugadzira fiber, uye izita rekutengesa re polyester fiber muChina. Uchishandisa PTA kana dimethyl terephthalate (DMT) uye ethylene glycol (MEG) sezvinhu zvakasvibiswa kuburikidza neesterization kana transesterization uye polycondroll, iyo fiber-inogadzira polymer - poly ...
Mushure mekukweka mucheka kana wapedza, nei ruvara ruvara ruchachinja? Chii chekuita nezvazvo?
na admin on 20-05-19
Mushure mekukweka mucheka kana wapedza, nei ruvara ruvara ruchachinja? Chii chekuita nezvazvo? 1.Caus Mushure mekupfekedza uye kupedzisa, iyo ruvara uye mwenje wemachira unochinja kune imwe nhanho. Ichi chiitiko chakajairika chekukwepa. Zvinoenderana nekuongororwa, zvinhu zvinotevera zvakavharwa ...
Iko kukonzera kweiyo denim color mutsauko
Kugadziriswa kwezvipfeko zve denim munyika yedu kwane makumi emakore, kunyangwe kutanga kunonoka, asi kukura kwacho kuchikurumidza.Pari parizvino, zvipfeko zve denim zvakapinda muchikamu chakura. Nekuvandudzwa kweThe Times, chipfeko chemombe chinogara chichifambira mberi. Parizvino, China̵ ...
Kushandiswa kweiyo thickener mukudhinda kwe pigment uye mamiriro ayo akajairika
na admin musi wa 19-12-23
Inomesa mumiriri, inova iri chaiyo mhando yemubatsiri wezvekudyira, anoshandiswa mukudhinda machira uye dhiza rekuumba, haigoni kungoita kutonhodza kukwenya, kudzivirira chiitiko chekuyerera chakarembera mukuvakwa, uye chinogona kupa kuturika yakanakisa michina midziyo uye yekuchengetedza kusimba. E ...
Iyo nyowani anti - phenol yemajenti inoshamisa kuti inodhura-inoshanda
Pakutanga kweGore Nyowani, maererano nemusika unoda, Dongguan taiyang machira makemikari co., Ltd. akatanga chirongwa chitsva chemachira, chinodaidzwa kuti anti-phenol yero mumiririri tyyr-88a. Izvo zvinonzwisiswa kuti ichi chigadzirwa chakakosha anionic poteni yakakodzera, yakakodzera polyamide fibe ...
Kuongorora nheyo yekushandisa ye whitener
Chii chinonzi whitener Whitener chinonzi chekirasi yemasikirini akaumbwa, inogona kuvandudza kuchena kwemuti wemufaira uye pepa, zvakare rakanzi optical whitener, fluorescent whitener. Musimboti we whitener application nekuti iyo mucheka unowanzove une tsvina yemavara uye yero, kushandiswa kwakawanda kwechemic ...
Kuongorora hunhu hweiyo hygroscopic uye kuputika uye kushandiswa kwayo muindasitiri
Hygroscopic uye inopesana zvakare mubatsiri weiyo hygroscopic uye inopedzeredza kupedzisa. Iyo ndeye yerudzi rwe isiri-ionic hydrophilic polymer. Kunyudza kunyorova nekutsvaira kwekutsvaira kwemucheka ndeyekuita kuti mucheka wacho ugadzire mvura, kupera kwemunyoro, nekuomesa nekukurumidza uye zvimwe chara ...
Hunhu hweAnti -stain mumiririri wezvemachira emachira uye kuongororwa kwaro kushandiswa muindastiri
Anti - dura mumiriri, sezita zvarinoreva, ndeyekudzivirira mucheka anti - dhiza chiitiko chemubatsiri anoteedzera. Kubva pane zvakasiyana zvekushandisa zvinhu, anopesana nedhiraivhu anogona kupatsanurwa muwaini anti-stain agent, anoshanda anorwisa-stain agent. , nezvimwewo. Acid anti-stain agent: ...
KUFUNA KWAVE PRICELIST
Zvigadzirwa zvinopisa - Sitemap - AMP Mobile
Lipu Industrial Estate, Huangjingkeng Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China, 523760